27 Koorsooyin Online ah oo Lacag La'aan ah oo loogu talagalay Dhalinyarada 13-19 Jirka ah 2022
27 Koorsooyin Khadka Tooska ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Dhallinta da'doodu tahay 13-19 Jir
Halkan waxaad ka heli doontaa koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dhalinyarada si ay maskaxdooda u ilaaliso oo ay si isku mid ah uga caawiso iyaga ilaa dugsiga sare oo laga yaabo inay ka caawiyaan inay go'aansadaan waxa ay ka baran karaan kulliyadda ama jaamacadda.
Koorasyadan internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxaa bixiya macalimiin sare iyo macalimiin ka socda jaamacado kala duwan oo ku baahsan aduunka. Jaamacadahani waxay fahmeen baahida loo qabo in dhallinta si wanaagsan loo barto maadaama ay hayaan furaha mustaqbal guul leh.
Akhristayaashu sidoo kale waa inay ogaadaan in qodobkaan kaliya loogu talagalin dhalinyarada laakiin sidoo kale waalidiinta iyo qofkasta oo kale oo weyn si lamid ah sida aqrintu u muujin laheyd macluumaadka ku saabsan koorsooyinka internetka ee ay hada ugu gudbin karaan kuwa yaryar, laga yaabee walaalaha da 'ahaan ku jira da'da ama carruurtooda kuwaa waalid.
TAXADIR: Waa inaad ogaataa inay jiraan kulliyadaha online-ka ah oo lacag kugu bixiya si aad casharro u qaadato online; tani waa dhif laakiin way jiraan.
Maadaama waalid ama walaal ka weyn oo awood u leh inuu la kulmo koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada wuxuu u gudbin karaa kuwaaga yar yar sidoo kale wuxuu noqon karaa hagaha koorsada waxbarashadooda, yaa kale oo ka caawin doona inay wax ka ogaadaan waxyaalahan oo kale hadaadan ahayn adiga walaal ka weyn ama waalid.
Dhallinyaradani waa mustaqbalka adduunkeena iyo sida ugu wanaagsan ee loogu qurxin karo mustaqbalkan marka loo eego waxbarashada. Barbaarinta da'yarta sida saxda ah waa sida awoodooda loo daah-furi karo, loo qurxin karo, looguna qaabayn karo wax macno leh, oo si uun ama si kale wax ugu taraya bulshada.
Ku saabsan koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada
Maxay yihiin faa'iidooyinka koorsooyinka khadka tooska ah ee dhalinyarada loo siiyo?
Ma jiraan koorsooyin onlayn ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dhalinyarada?
Koorsooyinka khadka tooska ah ee dhalinyarada (Koorsooyinka khadka tooska ah ee 13+ jir ah)
#1 Todobaadka Xeerka: Barashada Barnaamijyada Bartayaasha Da'da yar
#2 Cunto Daawo ahaan
#3 Isbeddelka Cimilada: Sayniska
#4 Aasaaska Caafimaadka Adduunka
#5 Dhismaha Computerka
#6 Ka Hortagga Dhaawaca Carruurta iyo Dhallinta
#7 Barista Carruurta Xogta ku saabsan
#8 Sayniska Jimicsiga
#9 Hordhac Aragtida Muusiga
#10 Taariikh Weyn: Isku xidhka Aqoonta
#11 Gitaarka bilowga ah
#12 Hordhac Falsafadda
#14 Cudurada faafa, Faafida iyo Faafida
#16 Hordhac Calculus
#17 Xisaabinta: Hal doorsooma Qaybta 1 - Hawlaha
#18 Xisaabinta: Hal doorsooma Qaybta 3 - Is-dhexgalka
#19 Sida Loo Codsado Kulliyadda
#20 Codsiga Jaamacadaha Mareykanka
#21 Hordhac Fiisigiska
#22 Sayniska Nidaamka Qorraxda
#23 Astronomy: Sahaminta Waqtiga iyo Goobta
#24 Ku qorista Ingiriisida Jaamacadda
#25 Dhaqanka Xoolaha iyo Daryeelka
#27 Ecology: Dhaqdhaqaaqa Deegaanka iyo Ilaalinta
Dhalinta maanta jirta nasiib ayey leeyihiin madaama ay heli karaan tikniyoolajiyado kala duwan oo u fududeynaya waxbarashadooda iyo caqli badan isla markaana ku baraya inay u adeegsadaan tikniyoolajiyadan habka saxda ah sidoo kale waa muhiim maadaama ay sidoo kale leeyihiin dhinacyadooda xun oo khatar gelin kara waxbarashadooda caqliga leh.
Waxay ku baran karaan wax kasta oo ay rabaan iyagoo isticmaalaya talefanka casriga ah iyo isku xirka internetka xasilloon, makiinadaha raadinta ayaa had iyo jeer u taagan inay ka helaan jawaabaha ay u baahan yihiin, waxay si isku mid ah wax uga baran karaan aaladaha kale ee warbaahinta sida telefishanka, warbaahinta bulshada, iwm.
Teknoolojiyaddu runti way ka dhigtay barashada runtii fudeyd iyo caqli sidoo kale wali waa isla tiknoolajiyaddan loo adeegsado qaabeynta iyo aasaasida baraha internetka halkaas oo aad si macno leh uga baran karto koorso kasta oo aad xiiseyneyso iyada oo buuq la'aan.
Barashada khadka tooska ah waxaa loogu talagalay inay ka caawiso qof walba inuu helo waxbarashadiisa uu u qalmo ama uu u baahan yahay, waa laga yaabaa inaad shaqeyso laakiin aad rabto inaad hesho Degdeg deg deg ah shahaadada bachelorka ee internetka ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad wax u barato a - Shahaadada mastarka tooska ah ee Stanford, haa waa suurtagal in wax lagu barto oo lagu helo shahaadooyinkan khadka tooska ah.
Waxaa laga yaabaa inaad sii xiisayso inaad ogaato kuwa caanka ah Hay'adaha Ivy League ee aad ogtahay waxay sidoo kale bixiyaan koorsooyin internetka ah oo bilaash ah waana inaad fiirisaa iyaga si aad uga hor mari karto asxaabtaada oo aad xirfad ugu yeelatid koorsooyinka waaweyn ee tacliinta.
Sidoo kale, maqaalkan, waxaan ku taxaabay 21 koorso oo online ah oo bilaash ah oo loogu talagalay da'yarta kuwaas oo ku siin doona xirfado iyo aqoon la yaab leh, aqoonta la helayna waxay si fiican ugu eegi doontaa codsiyadaada kulliyadda waxayna ku siin doontaa bilow bilow ah oo ka mid ah asaagaaga.
Koorasyadan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee dhalinyarada ayaa ka caawin doona u diyaarinta dhalinyarada jaamacada ama kuleejka, waxayna ka caawinayaan inay noqdaan kuwo madaxbanaan oo awood u leh inay qaadaan masuuliyada.
Si ka duwan dugsi-dhigashada dhaqameed, koorsooyinka khadka tooska ah waa dabacsanaan micneheedu waa inaad hagaajiso markaad rabto inaad wax u barato sida jadwalkaaga.
Koorsooyinka khadka tooska ah si isku mid ah ayey uga dhakhso badan yihiin in la dhammaystiro, waxaad ku dhammaysan kartaa koorso khadka tooska ah hal bil gudaheed mararka qaarkoodna wax ka yar waxaadna helaysaa isla xirfadaha iyo aqoonta uu ardayga caadiga ahi heli doono sannad gudihiis.
Marka taasi waxay kaa dhigeysaa waqti dheeri ah oo aad ku sii wadato barashada, sidaa darteed sannad gudihiis, waxaad ku baran kartaa illaa shan ama in ka badan koorsooyin kala duwan oo khadka tooska ah ah.
Qaadashada fasal khadka tooska ah ah oo ah dhalinyaro ayaa si dhakhso leh kuugu soo bandhigi doonta tikniyoolajiyadda walwalka waxbarashaduna si weyn ayuu u yaraanayaa, uma baahnid inaad dugsi aaddo maalin kasta, gurigaaga ayaad la fadhidaa kombuyuutarkaaga iyo khadka internetka iyo baro waxkasta oo aad xiisaynayso.
Faa'iidada kale ee cajiibka ah ee koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada ayaa ah inaad wali ku jiri karto dugsiga sare oo aad wali go'aansato inaad qaadato koorsooyinkan, waxaad kaqeyb geli kartaa iskuulkaaga caadiga ah ee wax ka barta halkaas oo aad wali ku sii wadataa barashada khadka tooska ah Xaqiiq yaab leh?
Waxaa jira casharo badan oo koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dhalinyarada inay bartaan taasi waa waxa maqaalkani inta badan ku saabsan yahay waxaana soo aruuriyay 21 kamid ah sidaa darteed waxaad dooran kartaa midka kugu habboon markaa waxaad bilaabi kartaa barashada bilaashka ah.
Sidoo kale, waxaad go'aansan kartaa inaad wax ka barato wax kabadan hal ama inta aad awoodo oo maahan inaad lacag kubixiso inaad waxbarto maadaama ay dhamaantood xor yihiin.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada
(Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee loogu talagalay 13 + Sannadaha)
21-ka koorso ee internetka ee bilaashka ah ee aan soo aruuriyay waxaa loogu talagalay dhalinyarada da'doodu tahay 13 - 19 waxayna kala yihiin;
Barnaamjiin loogu tala galay dhalinyarada waxbartay
Cunto ahaan daawo ahaan
Isbedelka Cimilada: Sayniska
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah Caafimaadka Caalamka
Kahortagga Dhaawaca ee Carruurta iyo Dhallinyarada
Barida Caruurta Xogta
Hordhaca Aragtida Muusigga
Taariikh weyn: Isku Xidhka Aqoonta
Gitaarka bilowga ah
Farshaxan ahaan Naqshad ahaan
Cudurrada faafa, faafa iyo dillaac
Calculus: Qaybta Kaliya ee Isbadalka ah ee 1 - Shaqooyinka
Calculus: Qaybta Kaliya ee Isbadalka ah ee 3 - Isdhaxgalka
Sida Loo Codsado Kuleejka
Dalbashada Jaamacadaha Mareykanka
Hordhac ku saabsan Fiisigiska
Sayniska Nidaamka Qorraxda
Xiddigiska: Sahaminta Waqtiga iyo Hawada
Qorista Ingiriisiga ee Jaamacadda
Dabeecadda Xannaanada iyo Daryeelka
Dino 101: Diinosaur Paleobiology
Ecology: Dhaqdhaqaaqa Deegaanka iyo Ilaalinta
#1 Toddobaadka Xeerka: Barista Barnaamijyada ee Bartayaasha Da 'yarta ah
Kooraskan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee dhalinyarada waxaa loogu talagalay macalimiinta, waalidiinta iyo walaalaha ka waaweyn si loogu dhiirigaliyo dhalinyarada inay bartaan barnaamijyada iyo codaynta markay yar yihiin. Adiga oo weyn ayaa baran doona ka dibna u gudbin doona da'yarta si aad u qalabayso xirfadaha barnaamijyada iyo codaynta oo aad u diyaariso mustaqbalka booska dhijitaalka ah.
#2 Cunto ahaan daawo ahaan
Kani waa koorso bilaash ah oo khadka tooska ah loogu talagalay dhalinyarada halkaas oo ay ka helayaan sahaminta fikradda cuntada daawo ahaan, baro barashada muhiimada cuntada ee kahortaga cudurada qaarkood ogaadaan nooca cuntada ay cunayaan markay jiran yihiin si loo wanaajiyo caafimaadka. Waxay sidoo kale awoodi doonaan inay fahmaan nafaqada cuntada iyo muhiimadda ay u leeyihiin caafimaadka aadanaha.
#3 Isbedelka Cimilada: Sayniska
Qof walba waxaa loo xil saaray ilaalinta Dunida, xitaa dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada waxay u baahan yihiin inay bartaan sida isbedelka cimilada uu u saameeyo meeraha iyo sida looga fogaado maadaama ay yihiin mustaqbalka dhulka. Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada, waxay awoodi karaan inay ka difaacaan dhulka waxyeelada iyagoo fahmaya sayniska.
#4 Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah Caafimaadka Caalamka
Kooraskan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee dhalinyaradu waxa uu dhalinyarada u soo bandhigayaa fikradda caafimaadka adduunka oo la baro sida looga hortago cudurada iyo sida loo daryeelo kuwa jiran iyo wax looga qabto arrimaha caafimaadka waaweyn. Dhalinyaradda qaata koorsadan waxay baran doonaan muhiimada ay leedahay inay caafimaad qabaan tanina waxa laga yaabaa inay u bilowdo xirfad dhinaca caafimaadka ah.
#5 Dhismaha Kombuterka
Kumbuyuutarradu waa mustaqbalka iyo yaa si fiican wax u barta oo loo qalabeeyaa xirfadaha haddii aysan dhallinyarro ahayn, koorsadani waxay baraysaa dhallinyarada xiisaha leh naqshadda adag ee kombiyuutarada iyo dhammaan astaamaha gudaha. Koorsadan khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxay dhalinyarada u kaxayn doontaa goobta dhijitaalka ah waxayna u diyaarin doonaan mustaqbal goobta sidoo kale.
#6 Kahortagga Dhaawaca ee Carruurta iyo Dhallinyarada
Koorsadan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada ayaa dhab ahaantii loogu talagalay macallimiinta, waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah si loo baro dhallintooda fikradaha muhiimka ah ee ku saabsan sida looga hortago dhaawacyada dhammaan noocyada noloshooda halista ku ah.
#7 Barida Caruurta Xogta
Xogtu waa geeddi socodka kor iyo hoos ee wax kasta oo aan ku qabanno adduunka dhijitaalka ah, koorsadani waxay carruurta u muujineysaa booska dijital ah, muhiimadda xogta iyo doorka muhiimka ah ee ay ka ciyaareyso booska.
Jimicsigu wuxuu muhiim u yahay jirka iyo maskaxda iyadoon loo eegin da'da, koorsadan khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxay baraysaa muhiimada jimicsiga iyo saameynta ay ku leedahay jirka bini'aadamka labadaba nafsiyan.
#9 Hordhaca Aragtida Muusigga
Ma tahay qof dhalinyaro ah oo xiiseynaya muusigga mise waalid ahaan waxaad ogaatay inuu ilmahaagu leeyahay hibooyin muusig? Kadib koorsadan khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxay ku habboon tahay cunugaas inuu bilaabo barashada iyo inuu khibrad u yeesho aragtida muusikada. Inta lagu gudajiro fasalkan internetka, ardaydu waxay sahmin doonaan wada noolaanshaha aasaasiga ah, garoonka, laxanka, jaantusyada, miisaannada, furayaasha iyo waxyaabo kale oo badan.
Dhallinyaradu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay bartaan taariikhda dhulka, siday ahayd bilyanno sano ka hor oo ay bartaan aqoon kale oo adduunka ku xidhan. Koorsooyinkaan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxay iyaga bari doonaan dhammaan taariikhahan markay safarka u galayaan soo helitaanka adduunkeenna.
Isticmaalka aragtida muusiga aasaasiga ah, dhallinyaradu waxay baran karaan sida loo ciyaaro gitaarka acoustic ama koronto iyagoo raacaya koorsadan internetka ee bilaashka ah. Waxa ay baraysaa dhallinta hab fudud oo ay ku noqon karaan gitaariste oo ay u bilaabayaan socdaalkooda adduunka muusiga.
Ma ogtahay waxa falsafadu tahay? Miyaad sidoo kale ogtahay inay jiraan fikrado kala duwan oo falsafad ah sida falsafada maskaxda, falsafada sayniska, falsafada akhlaaqda iyo falsafada siyaasadeed dhamaantoodna waxay muhiim u yihiin fahamka nolol maalmeedkeena. Ka bilow safarkaaga falsafadda adoo adeegsanaya koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada isla markaana ku kasban dhammaan khibradaha falsafadeed ee aasaasiga ah ee aad heli karto.
#13 Fashion sida Design
Noqoshada a fashion naqshadeeye wuxuu ubaahan yahay hal abuur badan hadii dhalinyaro ahaana aad leedahay hibada hal abuurnimo ee waa inaad fiirisaa noqoshada naqshadeeye moodada, waa mid macaash badan waana sii socotaa marka laga reebo aruurinta khibrada da 'aad u da' yar waxay kaliya kaa dhigeysaa wax badan fiican marka aad gabowdid oo aad magac ku yeelato warshadaha.
#14 Cudurrada faafa, faafa iyo dillaac
Cudurkii faafa ee dhowaa dunida soo maray wuxuu muujiyey in qof walba, gaar ahaan dhalinyarada, loo baahan yahay in lagu wacyi galiyo sida loola tacaalo cudur faafa ama faafa, wuxuu baranayaa xaqiiqooyinka ku saabsan cudurada faafa, jawaabaha caafimaad iyo sharciyada karantiil. Koorsadan khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada ayaa waxbadan ka tari doonta ka caawinta dhalinyarada ka hortagga cudurada dilaaga ah.
Koorsadan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxaa bixiya muxaadarooyin sare oo ka socda Jaamacadda Kentucky waxayna daboolayaan maadooyinka kiimikada dugsiga sare ee horumarsan ee daboolaya aagagga sida qaab dhismeedka atomiga, iskudhafka, falcelinta, stoichiometry, thermochemistry iyo mowduucyo kale oo kaa dhigi doona inaad ku dhaafto kiimikada dugsiga sare midabada duulaya.
#16 Hordhaca Kalkulas
Ku bilow safarkaaga xisaabta adoo adeegsanaya koorsadan khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada taas oo u bandhigeysa ardayga aasaaska iyo aragtida aragtida ee xisaabta sayniska, injineernimada iyo xisaabta.
#17 Calculus: Qaybta Kaliya ee Isbadalka ah ee 1 - Shaqooyinka
Ka dib marka aad dhammaystirto xisaabta hordhaca ah waxaa ugu wanaagsan inaad ku dhex muquurto tan si aad aqoon dheeraad ah uga hesho mawduuca, kalkulas.
#18 Calculus: Qaybta Kaliya ee Isbadalka ah ee 3 - Isdhaxgalka
Qeybtan xisaabeedku wuxuu daboolayaa aragtida aasaasiga ah ee xisaabinta isku-dhafan, isku-dhafka isleegyada kaladuwan iyo farsamooyin kasta oo is-dhexgal ah oo ku xiran xisaabta. Heerkaan, waxaad kuheli laheyd xirfado xisaabeed heer sare ah.
#19 Sida Loo Codsado Kuleejka
Koorsadan khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxay bartaa sida loo raadsado loona codsado kulliyad ay ka mid tahay habka xulashada iyo sida loo diyaariyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah iyo qorista sida qormooyinka lagama maarmaanka u ah codsiyada kuleejka.
#20 Dalbashada Jaamacadaha Mareykanka
Nidaamka dalabka jaamacadaha Mareykanka waxaa lagu yaqaan inuu jahwareer yahay maadama uusan laheyn nidaam codsi caadi ah, koorsadan bilaashka ah ee qaangaarka ah ee loogu talagalay dhalinyarada ayaa loogu talagalay in lagu ciribtiro jahwareerka iyadoo la siinayo macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan dukumiintiyada iyo qaybaha lagama maarmaanka u ah codsiga jaamacadda Mareykanka. Maalmahaagii jahawareerku way ka dhammaadeen koorsadan.
#21 Hordhac ku saabsan Fiisigiska
Koorsooyinkaan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxaa bixiya bare sare oo fiisigis ah oo ka tirsan Jaamacadda Virginia waxayna baraysaa barayaasha xiisaha u leh fiisigiska macnaha guud ee walxaha maalinlaha ah.
Markaad fiiriso cirka habeenka waxaad jeceshahay waxaad aragtay iyo waxaad waxbadan kabaraneyso, waxaad dooneysaa inaad ogaato waxa meesha yaal, sifiican, koorsooyinkan internetka ee bilaashka ah ee dhalinyarada waxay adeegsadaan mabaadi'da fiisikiska, bayoolajiga, kimistariga, iyo cilmiga geology si aan kuugu sharaxno nidaamkeena qorraxda isla markaana kuu kashifo waxyaalaha qarsoon ee adiga kugu saabsan.
#23 Xiddigiska: Sahaminta Waqtiga iyo Hawada
Cilmiga xiddigiska (astronomy) waa goob daraasad xiiso badan leh oo dhalinyarada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay bartaan koorsada si ay u bilaabaan inay khibrad hore ka helaan maadada. Haddii aad dabagal ku sameyso koorsooyinkan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada, sidoo kale waxaad kula cusbooneysiin doontaa waxyaabaha ugu dambeeyay ee cilmiga xiddigiska la helay maxaa yeelay waxay kaa caawin doontaa khibradaada cilmiga xiddigiska.
#24 Qorista Ingiriisiga ee Jaamacadda
Haddii aad tahay qof doonaya jaamacad waxaa muhiim ah inaad qaadatid koorsadan, waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto xirfadahaaga ku hadalka iyo qorista Ingiriiska oo kaa caawin doona labadaba aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba. Waxa jira albaabbo badan oo ku hadlaya isla markaana qorista Ingiriisiga si sax ah ayaa kuu furnaan doona.
#25 Dabeecadda Xannaanada iyo Daryeelka
Koorsadan internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada waxay ku lug leedahay barashada dhaqanka xayawaanka iyo caqabadda helitaanka shucuurta xoolaha. Waxaad baran laheyd sida loo daryeelo xayawaanka iyo sidoo kale inaad hesho xirfadaha aasaasiga ah ee caafimaadka xoolaha ee habka barashada koorsadan internetka.
#26 Dino 101: Diinosaur Paleobiology
Dinosaurs-ka ayaa dabar go'ay kumanaan sano ka hor laakiin daraasado ayaa wali lagu hayaa iyaga si ay wax badan uga bartaan iyaga inta ay noolyihiin waxayna kugu xiisi laheyd inaad ogaato inaad adiguna ka mid noqon karto daraasaddan adoo ku biiraya koorsooyinkaan internetka ee bilaashka ah. dhalinyarada.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah, dhalinyaradu waxaa lagu baray cilmiga bey'ada iyo dhaqdhaqaaqa deegaanka, waxa ay ka dhigan tahay iyo doorka bini aadamku ka ciyaarayo mawduuca.
Tani waxay joojineysaa koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada, koorsooyinkan waxay gacan ka geysan doonaan kobcinta xirfadahooda fekerka waxayna ka dhigayaan xitaa aqoon dheeraad ah bixinta jawaabaha waxyaabaha ay weligood ku wareersanaayeen.
Waxaa kale oo muhiim ah in waalidiinta, dadka ardayda masuulka ka ah, iyo walaalaha waaweyni ay hagaan caruurtooda inta ay ku guda jiraan barashadooda internetka maadama ay door muhiim ah ka qaadaneyso go'aan ka gaarista mustaqbalkooda iyo shaqooyinkooda.
Koorsooyinka Kumbuyuutarka ee Khadka Tooska ah
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Koonfur Afrika
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada
wax ku barta internetka Xidhiidhka kafaala qaaday
koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dhalinyarada
Previous Post:13-ka Jaamacadood ee ugu Da’da Weyn Kanada kana sheekooyinkooda
Post Next:22 Goobo Deg Deg ah oo Ebook Bilaash ah oo aan Diiwangelin lahayn
Linzi wuxuu leeyahay,
September 18, 2021 at 11: 49 pm
Ma caawin kartaa, waxaan raadinayaa koorso 15 jirkeyga si uu uga qeyb qaato. Fadlan ma ii soo diri kartaa xoogaa macluumaad ah, oo ku saabsan sida loo aado codsashada koorso iwm.
NANDHINI wuxuu leeyahay,
July 14, 2021 at 10: am 16
40, Lorong Mahsuri,
3, Bayan Baru,
Anonymous wuxuu leeyahay,
April 10, 2021 at 10: 08 pm
hi sidoo kale waxaan rabaa in aan kaqeyb qaato barashada qadka internetka waxaan rabaa in aan kahelo dhibco sare iskoolka aad baan u dhibtoonayay
Disha Gaekwad wuxuu leeyahay,
March 14, 2021 at 2: 55 pm
Waxaan rabaa inaan kaqeybqaato koorsadan khadka tooska ah.
jamaica phipps wuxuu leeyahay,
November 25, 2020 at 5: am 13
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto ka hortagga dhaawaca carruurta iyo dhalinyarada.
December 3, 2020 at 4: am 48
Si fudud guji xiriirka oo iska qor bilaash